आइपीएल:-आज दिल्ली क्यापिटल्सले खेल्दै , के अटाउँलान् सन्दीप ? – Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर - Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर
आइपीएल:-आज दिल्ली क्यापिटल्सले खेल्दै , के अटाउँलान् सन्दीप ?
Mid Nepal News, १० चैत्र २०७५, आईतवार ०७:५७
चैत्र १० – भारतकै चर्चित क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को १२ औँ संस्करण हिजोबाट सुरु भएको छ । पुलवामामा आक्रमण भएको कारण नै बिना तामझाम सुरु भएको आइपीएलमा आज दुई खेल हुँदैछन् । आजको पहिलो खेल कोलकता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदरावादबीच हुँदैछ । जुन खेल सवा ४ बजे हुनेछ । यसैगरी आज नै अर्काे खेल मुम्बई इन्डियन्स र र नेपाली स्पिनर युवा खेलाडी सन्दीप लामिछाने आवद्ध रहेका दिल्ली क्यापिटल्सबीच हुनेछ। जुन खेल राती सवा ८ बजे हुँदैछ ।
गत बर्ष दिल्लीबाट नै खेल खेलेका सन्दीपले उक्त सिजनमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । सोही कारण पनि आज हुने खेललाई नेपालीहरुले बिषेश महत्व दिएका छन् । दिल्ली क्यापिटल्सको फेसबुक पेजमा सन्दीपलाई प्राथमिकतासाथ देखाईएको छ । तथापी आजको खेलमा सन्दीप रहन्छन् वा रहँदैनन् भन्ने चाही खुलाईएको छैन ।
गत बर्ष सन्दीपलाई टिमले अन्तिम-अन्तिम चरणमा खेलाईएको थियो । जहाँ सन्दीपले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेपछि भारतीयहरुले पनि सन्दीपलाई ढिलो खेलाएको भन्दै टिमको आलोचना गरेका थिए । यता हिजोमात्र सम्पन्न भएको पहिलो खेलमा चेन्नाई सुपरकिंग्सले रोएल च्यालेन्जर्स बैंगलोरलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो ।